China Ihowuliseyili eyenzelwe uLebheli yaMabhokisi abucala ye-3D Lashes 100% Real Mink Eyelashes Abathengisi mveliso kunye nabenzi | Weiti
Ihowuliseyili yeeBhokisi zeeleyibheli eziCwangcisiweyo zabucala i-3D Lashes 100% ye-Real Mink Eyelashes Abathengisi
1, isitayile se-AILSA se-18mm mink fur lashes
2, Ithambile, intofontofo, eyelashes yendalo ye-3d
I-3, ileyibheli yabucala ehleliweyo ekhoyo
I-4, 100% eyenziwe ngezandla ezikumgangatho ophezulu ezenziwe nge-mink
I-OEM kunye ne-ODM YOBUXOKI
Uyilo oluqhelekileyo lwelogo yabucala
Amava okuvelisa i-eyelashes atyebileyo
I-100% yokwenene yenkohliso yenkululeko yasimahla
100% eyenziwe ngesandla
Elungiselelweyo logo yabucala
200000 ngababini ngenyanga
I-SGS, i-CE, i-ISO9001
I-eyelashes yethu engeyonyani yonke yenziwe ngesandla, yenziwe ngeenwele ze-mink ezikhanyayo, ezithambileyo nezithambile njengamashiya akho endalo. Ii-eyelashes zobuxoki ezenziwe ngesandla zinokusetyenziswa kwakhona kwaye ziphathwe ngononophelo. Usebenzisa itekhnoloji ye-eyelash eyenziwe, i-eyelashes inokuba yendalo kwaye ithambe njenge-eyelashes yokwenyani, ekuvumela ukuba uhlale ugqamile.
Iintlobo ngeentlobo zezitayile ezitshisayo ziyafumaneka, kwaye ikwaxhasa ulwenziwo lwezitayile ezifunwa ngabathengi. Abathengi bafuna kuphela ukusibonelela ngeemfuno ezithile kunye neeparameter okanye iisampulu zomzimba.
Izinto ezikhethiweyo ze-eyelashes ezingezizo, emva kweminyaka yokuqokelelwa kwamava, sele sinobulunga obuphezulu, obusebenzayo bezinto eziluhlaza, ixesha elide zisinika izinto ezilungileyo zokwenza izinto.
100% eyenziwe ngesandla. Xa kuthelekiswa nokuveliswa komatshini, imveliso eyenziwe ngezandla inokuqinisekisa ukuba i-eyelashes engeyonyani ayizukuxaka, kwaye sisebenzisa iglu ngesandla ukuze siqiniseke ngcono ukuba i-eyelashes ayizukuwa.
Iintlobo ngeentlobo zokupakishwa kweenkophe ezingeyonyani zingenziwa ngokwezifiso. Ukwenza ulwenziwo lwelogo, ukupakisha kwempahla okulungeleyo kuxhasa ukushicilelwa kwe-UV ye-3d. Ibhokisi elungelelanisiweyo ixhasa ushicilelo lwe-UV kunye nokushicilela okushushu okushushu.
Ukulungiselela imivumbo yesitokhwe esele ilungile, ixesha lokuhambisa liphakathi kweeyure ezingama-48, kwimivimbo eyenzelwe wena, ixesha lokuhambisa liphakathi kweentsuku ezingama-7-25.
Iiyure ezingama-24 ezikwi-Intanethi
Umbuzo wabathengi uya kuthathelwa ingqalelo okokuqala. Ukubuza ngokungxamisekileyo, nceda uthethe nathi ngomnxeba okanye ngomyalezo othe ngqo.
Ngayo nayiphi na ingxaki esemgangathweni okanye eyonakeleyo ngokuhamba, ungacela ukubuyiselwa imali okanye uphinde uthumele iimpahla ngaphakathi kweentsuku ezintathu zomsebenzi.
Kutheni unxibe imivumbo engeyonyani?
I-eyelashes yobuxoki inokwenza amehlo abukeke makhulu kwaye abenomtsalane, kwaye inqanaba lokugoba linokuhambelana ne-eyelashes, eliya kujongeka linomtsalane.
I-eyelashes yobuxoki yayikho kwi-Egypt yakudala naseRoma. Ama-eyelashes ayekhe athathwa njengowona mqondiso okhangayo. Emva kwexesha, emva kokuzalwa kweenkophe ezingeyonyani, abantu abaninzi baphinde balandela i-eyelashes. Ngo-1916, umlawuli wefilimu wasebenzisa iinwele zokwenyani ukwenza iinkophe zobuxoki kwiimfuno zemveliso yefilimu nomabonakude. Emva kwexesha, imodeli yase-Bhritane yabeka umkhwa wokunxiba iinkophe ezingeyonyani, kwaye abantu abaninzi bayazi malunga nobukho beemfama zobuxoki.
Kwinqanaba lamva leenkophe zobuxoki, kukho iintlobo ezininzi, iimilo ezahlukeneyo kunye nemibala, kunye nezihlandlo ezahlukeneyo. Kodwa akukhathaleki ukuba loluphi uhlobo lweeyelashes zobuxoki, zinokwenza amehlo "athethe" emva kokuba efakiwe, kwaye amehlo anomtsalane anele ukurhwaphiliza. Emva kwexesha, uninzi lwabantu alonelisekanga kukufaka iinkophe ezingeyonyani kwaye banqwenela ukubavumela ukuba bakhule ngokusisigxina ebusweni babo, kwaye ubuchule bokwandiswa kwe-eyelashe bazalwa.
Ngokubanzi, i-eyelashes yokuqala yobuxoki yayikukubonisa nje umtsalane wabasetyhini, kodwa ngoku i-eyelashes yobuxoki ihlawula ngakumbi ukusebenziseka, ifaneleke ngakumbi ukwakheka kwamehlo abantu, kodwa ikwanokwenza namehlo abukeke emakhulu kwaye enomtsalane.
Egqithileyo Ihowuliseyili ileyibheli yabucala eyi-100% eyenziwe ngenkohlakalo yasimahla kwi-3D Mink eyelashes Umthengisi
Okulandelayo: Yenza Eyakho Label Label Yakho Eyodwa Ihowuliseyili Eyelashes Mink
I-100% ye-mink eyelashes
I-3d mink imivimbo yomthengisi
yenza eyakho imivumbo
mink eyelashes abathengisi
Ihowuliseyili Fluffy 3d 100% Mink eyelashes ...
Yenza eyakho iilebheli zeleyibheli yakho yangasese ivenkile ethengisa ...
Eye Bulk Lashes okungangenwa re Classic 3d ...
I-OEM ye-3D eyelashes ye-Mink Lashes eyenziwe ngezandla ze-Fu ...
Ihowuliseyili zenziwe ashinyeneyo ezenziwe Fluffy 3d Mink imivumbo ...
Imivimbo ye-mink, Imivimbo yamehlo, eyeliner, I-liner yamehlo, Abathengisi bee-Eyelash, Izandiso zeEyelash,